DAAWO: Xafladda Caleema-Saarka Madaxweynaha Jubbaland oo bilaabanaysa goor dhaw, Yaase hadli doona.
KISMAAYO(P-TIMES) – Wariyaha PuntlandTimes ee Kismaayo ayaa sheegaya in ay goor dhaw bilaaban doonto munaasabada Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), iyadoo ay yimaaden wafdiga dalka Kenya.
Marka ay dhamaato waqtiga qadada ee magaalada Kismaayo ayay bilaaban doontaa munaasabadda, sidda ay sheegayaan guddiga Abaabulka ama qabanqaabada Caleema-saarka, waxaana madasha imaan doona xubnaha ugu badan ee kusugan.
Si weyn ayaa isha loogu hayaa Caleema-saarkan oo ay iskugu tageen Madaxdii hore ee Soomaaliya, Siyaasiinta mucaaradka, xildhibaanadii ugu badnaa ee golayaasha dawladda, Madaxweynaha Puntland iyo Siyaasiin lagu casumay.
Khudbadaha ay jeedin doonaan madaxdii hore ayaa ah kuwa isha lagu hayo, sidaas oo kale Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa halkaas ka jeedin doono khudbad, waxaana waqti uu noqonayaa mid aad u fara badan.
Siyaasiinta kala duwan ayaa yeeshay kulamo siyaasadeed loogu tashanayay dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana dhinacyadu aad uga hadlayaan arrimaha siyaasadda ee waqtigan taagan, dawladda Faderaalkuna waxay u aragtaa culeys siyaasadeed oo xoog leh.